Warri durii maaliif abbaa warraa maqaan hin waaman? - BBC News Afaan Oromoo
Namoonni harmeen keessan abbaa keessaniin maqaan hin waamne/hin yaamne jiraachuu maltu. Yookaan ammoo kan haati warraa keessan maqaa isin hin waamnes jiraachuu dandeessu.
Dubartoonni abbaa warraa keessan maqaan hin waamnes akkasuma jiraachuu dandeessu. Kun maaliif ta'e jettanii gaafattanii beektuu?
Achii-dhufteen aadaa kanaa maalidha? Haadha warraa abbaa warraa isaanii maqaan hin waamne dabalatee, qorattoota aadaafi afaanii irraa iyyaafanneerra.
"Haati warraa abbaa warraa maqaan hin waamtu, ni kabajjii, yeroo inni galu barriitti itti baatee ulee irraa fuuti. Galgala ammoo 'noor' jettee taa'umsa laattiif."
Hafaa haftee, miila irraa dhiqxi, dhiquu irra darbeeyyu miilla isaa ni dhungattiyyuuti," jechuun kokkolfaa ibsu Aadde Tolashee Fayyisaa.
Amma amma aadaan akkasii kun namni barachaa dhufuu isaatiin hafaa dhufeera kan jedhan Aadde Tolasheen, "dur durbi ofii isheetiin hin heerumtu. Kuni cabadha. warratu walitti dubbata" jedhu.
Akka Aadde Tolasheetti, inni fuudhuufi isheen heerumtu wal arganii ni bareedda ykn ni fokkista jechuun hin jiru ture duri.
Maatiin sanyii wal iyyaafatanii, kan warra guddaa dandeessudhaa jedhanii walitti laatu ture.
Aadaa fuudhaafi heeruma akkasii kana irraa kan dur warri wal fuudhan maqaa wal waamuu haa turuu akka malee akka walsodaatan dubbatu Aadde Tolasheen.
Dubartoonni dur saalfiifi sodaa irraa kan ka'e abbaa warraa isaanii maqaa waamuu haa turuu ol jedhaniiyyu ija keessa hin ilaalan jedhu.
"Darbee darbee isheen ija jabaattuun ishee garuu yoo maqaa hin waamtu ta'ellee maqaa dhalaan kan waamtu jirti," jedhu haati kun.
Maqaa waamuu lagachuun kabajadha?
Yunivarsiitii Jimmaatti barsiisaafi qorataan aadaa, seenaafi Afaan Oromoo Dr. Darajjee Fufaa maddi dubartiin maqaa abbaa warraa lagattuuf kabajadha jedhu.
Akka Hayyuu kanaatti maqaa waamuu lagachuun dubartoota qofaa osoo hin taane, Oromoon gaafa ilma fuusifatu intala heerumtee dhuftuttillee maqaa moggaafata malee maqaa isheen hin waamu.
"Akka isheen heerumtee dhufteen haati gurbaa deemtee sabbata irraa hiiktee ykn gaafa shananii maqaa moggaafatu. Kun kabajadha."
Dubartiin abbaa warraa maqaa waamuu qofa miti kan lagattu. Namoota mana maatii abbaa warraa ishee jiran hundatti maqaa baafatti malee maqaan isaan hin waamtu.
Abbaafi haadha abbaa warraa ishee garuu 'aabboo', 'aayyoo' ykn maqaa kanaan walfakkaatuun akka waamtus ni ibsu Dr. Darajjeen.
Maqaa lagachuus ta'e maqaa moggaafachuun kun safuu Oromoo akka ta'e ibsanii, namni aadaa kana kan kooti jedhee kan waliin guddatudha jedhu.
"Maqaa lagachuu qofa osoo hin taane akumti itti waamanillee safuu qaba. Oromoon safuu qaba, safuun sun ammoo humna guddaa qaba."
Maqaa waamuu lagachuun hariiroo lamaan isaanii gidduu jiru irratti dhiibbaa akkamii qaba?
Abbaan manaayyu maqaa haadha warraa isaa yeroo itti waamuu lagatu himuun, lamaan isaanii 'jaarsa koo', 'jaartii koo' jechuun yeroo itti wal waaman waan jiruuf maqaa wal lagachuun hariiroo haadha warraafi abbaa warraa gidduu jiru irratti rakkoo hin qabu akka Dr. Darajjeen jedhanitti.
"'Jaarsee koo', 'jaartee koo' jedhanii wal waamuun jaalala agarsiisa malee wal irraa fagaachuu, wal sodaachuu miti. Garuu kabaja mul'isa."
Obboleessaafi obboleettii, haadhaafi abbaa irra darbee firoota warra soddaa maqaa waamuu lagachuufi maqaa itti moggaafatanii isaan waamuun jaalalaafi kabaja agarsiisa malee hariiroo qaban wal irraa hin fageessu jedhu qorataan kun.
Dhaloonni ammaa maqaa wal waamuu wal ni lagatuu?
Dhaloota ammaa ilaalchisee waan lamatu jira jedhu Dr. Darajjeen. Inni tokkofaan jedhan, jalqaba akkaataa ittiin wal fuudhan irraa ka'ee safuun sun badeera. Kanaafis, maqaa wal lagachuun sun hafeera.
"Safuufi tartiiba fuudhaafi heerumaa osoo hin eegiin waan walitti dhufaniif akka arganitti wal waamu warri ammaa."
Inni durii maqaa wal lagachuu qofaa osoo hin taane, akkaataadhuma isaan ittiin walitti dhufaniyyu safuu hordofuufi, eeggachuun waan ta'eef bakka waliif kennu.
"Dur akkaataa sanaan walitti dhufanii, sana keessa darbanii wal fuudhanii wal hin hiikan. Yoo jiraatellee muraasa."
Bara kana garuu har'a walitti dhufanii waliin jiraatu booru garuu wal hiiku. Kanaaf, jaalallumtiyyu isa kam keessa jira? Jaalalli dhugaan isa kam keessa jira jennee gaafanne isa durii keessa jira," jedhan Dr. Darajjeen.
Yunvarsiitii Finfinneetti barsiisaan Afaan Oromoo Obbo Qulqulluu Ijoos yaaduma Dr. Darajjee deggaru.
"Maqaa wal waamuu wal lagachuun kun aadaa keessatti safuu waliin wal qabata. Aadaa Oromoo keessatti maqaa wal waamuu qofa osoo hin taane, waanti ijaanillee hin ilaalamne ni jira," jedhu.
Tapha Qillee: Tapha yeroo taphatan miidhaman beenyaa hin gaafanne